Malunga nathi -Protech International Group Co., Ltd.
Ukuphucula ukuhambelana kweNkampani kunye nokwakha iNkcubeko yeNkampani. Isishwankathelo sokubulela, uKuncoma ukuphela konyaka, kwaye Cinga ikamva!
IProtech International Group Co., Ltd. ithatha iimveliso zehardware njengeyona nto iphambili, kubandakanya ukubek'esweni okungaphakathi kwendalo nangaphandle, izixhobo ezinobuchule kunye neemitha, kunye namaqonga oxhulumaniso lwamafu, asetyenziswa ngokulandelelana kuvavanyo lwe-elektroniki nolombane, ukubek'esweni kwendalo nangaphandle kwekhaya, ukujonga uphawu lwezempilo kunye neminye imimandla. Ngaba sisisombululo esipheleleyo somniki. Iimveliso zithunyelwa kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla enjengeYurophu, iMelika kunye noMzantsi mpuma Asia. Amaqabane aphambili kumazwe aphesheya nguLoyoy Merlin, Foucault kunye nezinye iimveliso zamanye amazwe, kwaye iChina iyasebenzisana noXiaomi, Huawei namanye amaqonga.
Iprotech International Group Co., Ltd ine-ofisi edibeneyo kunye nefektri, egubungela indawo ye-1,500 yeemitha zesikwere. Ime kwisiThili saseNanshan, eShenzhen, kwiPhondo laseGuangdong, kumbindi weShenzhen. Inokudibanisa abathengi basekhaya nabangaphandle kumgama omfutshane. Kuthatha kuphela imizuzu engama-40 ukuba abathengi bafike kwidilesi yenkampani kwisikhululo seenqwelomoya.
Isebe le-R & D
Iprotech International Group Co., Ltd ithatha iimveliso zehardware ezingundoqo njengezona zibalulekileyo, kubandakanya ukubek'esweni kwendalo nangaphandle kwendalo, izixhobo kunye neemitha, kunye namaqonga oxhulumaniso lwamafu, asetyenziswa ngokulandelelana kuvavanyo lwe-elektroniki nolombane, ukubekwa esweni kwendlu nangaphandle kwendalo, ukubeka iliso kwimiqondiso yezempilo kunye neminye imimandla. Ngaba sisisombululo esipheleleyo somniki. Iimveliso zithunyelwa kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla enjengeYurophu, iMelika kunye noMzantsi mpuma Asia. Amaqabane aphambili kumazwe aphesheya nguLoyoy Merlin, Foucault kunye nezinye iimveliso zamanye amazwe, kwaye iChina iyasebenzisana noXiaomi, Huawei namanye amaqonga.